Thursday June 03, 2021 - 18:54:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaara lixaad leh ayaa dhabarka loo saariyay ciidamada dowladda Federaalka kadib dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya deegaanka Warciise ee duleedka degmada Jowhar ayaa sheegaya in ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay weerar safballaaran ku qaadeen saldhig ay maleeshiyaad dowladda ku leeyihiin deegaanka Warciise.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Al Shabaab ayaa si hordhac ah loogu sheegay in dagaalkii Warciise lagu dilay 18 askari oo sedax kamid ah ay yihiin sarakaiil sarsare.
Saraakiisha lagu dilay dagaalkii Warciise waxaa kamid ah Korneel Max'med Cabdi Waaxid Faarax oo ahaa taliyaha guutada Lixaad ee Gorgor islamarkaana ahaa sarkaal ay tababartay dowladda Turkiga.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in sarkaal kale oo magaciisa lagusoo gaabiyay Saciid Nuur uu kamid ahaa Tobanaan askar iyo saraakiil ah oo ku dhintay dagaalkii maanta.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Al Shabaab ay ciidamada dowladda ka gubeen illaa 3 gaari oo taaw ah, meydad farabadan ayaa daadsan deegaanka Warciise oo dhanka bari uga beegan degmada Jowhar halkaas oo dagaalyahanada Al Shabaab ay ku laayeen maleeshiyaad Turkiga lagusoo tababaray.
Dhaawacyo gaaraya 42 askari ayaa loo qaaday dhanka xarunta gobolka Sh/dhexe halkaas oo lafilayo in loogasii gudbiyo magaalada Muqdisho, dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkii maanta ka dhacay Warciise uu ahaa mid culus oo saacado badan qaatay.
Askar Ruushiyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqda weerar ka dhacay Suuriya.
Weeraro lagu dilay Askar Kenyaan ah oo ka dhacay duleedka degmada Raamuu.